အသက်က ၅၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ အမျိုးသမီးပါ။ စဖြစ်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်ကပါ။ မနက်အိပ်ရာထထချင်းမှာ ခေါင်းက ချာချာလည်မူးတာပါ။ ဘယ်ဘက်ကို ခေါင်းနဲနဲစောင်းတာနဲ့ ချာလည်မူးပါတယ်။ ညာဘက်တော့ စောင်းလို့ရပါတယ်။ တပတ်ကြာပါတယ်။ နောက် ဖြေးဖြေးချင်းသက်သာပါတယ်။ ၂ နှစ်လောက်ကြာတော့ ပါရဂူနဲ့ပြပါတယ်။ အာရုံကြောရောဂါလို့မပြောပါဘူး။ အရိုးကျီးပေါင်းနဲနဲတက်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောနဲနဲ ကျဉ်းချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆေးကတော့ supravit ၊ B6 ပေးပါတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလိုမူးနေပါတယ်။ မထနိုင်အောင် မူးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်ဘက်နားက စီစီဆိုပြီး အသံလေး မြည်နေပါတယ်။ အိပ်မပျော်တာနဲ့ ရင်တုန်တာကြောင့် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့
aprazolam 0.5 mg ကိုိ တနေ့ ၁ လုံးသောက်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်ပြီး မူးတာလဲသက်သာလာပါတယ်။ စွဲမှာစိုးလို့ အပြင်သွားမှ သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းသောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ထိ ၄ ကြိမ်မထနိုင်အောင်မူးပါတယ်။ ပထမ ၃ ကြိမ်ကတော့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းမှမူးတာပါ။ ၄ ကြိမ်မြောက်မှာတော့ ညာဘက်စောင်းမှ မူးပါတယ်။၂ဝ၁၄ မှာ ၁လ လောက်မထနိုင်အောင်မူးပါတယ်။ မူးတိုင်း မနက် ၃ နာရီ၊ ၄ နာရီ အချိန်လောက် စမူးတာပါ။ ဦးနှောက် နဲ့ အာရုံကြောပါရဂူဆီမှာ ပြကြည့်ပါတယ်။ သူက မွေးရာပါအာရုံကြောရောဂါလို့ပြောပါတယ်။ အာရုံကြော၂ ချောင်း
မှာ ၁ ချောင်းကပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံခြား သွားကုလဲမရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆေး
ကတော့ aprazolam 0.5mg ပဲပေးပါတယ်။ တသက်လုံး သောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ စာကို ၂ နာရီလောက် ဖတ်ရင်
မူးလာပါတယ်။TV ကြည့်ရင်လဲမူးလာပါတယ်။ ဘာလုပ်သင့်လဲဆရာ။
စာ (၃) ပုဒ်ပို့လိုက်ပါတယ်။
1. Dizziness အမူးရောဂါ
2. Vertigo အမူးရောဂါ (အရက်ကြောင့် မဟုတ်ပါ)
3. BPPV အရက်မသောက်ဘဲ မူးတဲ့ရောဂါ